Lost Ukusakazwa Agents-OBC-B62S - China Tianjin Oilbayer S & T
Isifinyezo Lost Ukusakazwa lengetiwe OBC-B62S inhlanganisela imicu amaminerali kanye zokwenziwa, esetshenziswa ukwenza ngcono ikhono ukuvuza-ubufakazi usimende slurry noma preflush. Umkhiqizo yakhiwa obuphelele ezahlukene, ubulukhuni ezahlukene, kanye kwabantu ezahlukene nezakhi ezimahhadlahhadla kanti okusezingeni eliphezulu dispensability amanzi, futhi kulula nombala futhi stably ziye ezindaweni usimende slurry, futhi yakha ibhuloho isakhiwo ukuvuza ukuvimbela ngempumelelo okuvela ukuvuza komhlaba . Lapho umthamo kuyinto 3.0kg / M3, ke ca ...
Ukusakazwa Lost lengetiwe OBC-B62S inhlanganisela imicu amaminerali kanye zokwenziwa, esetshenziswa ukwenza ngcono ikhono ukuvuza-ubufakazi usimende slurry noma preflush. Umkhiqizo yakhiwa obuphelele ezahlukene, ubulukhuni ezahlukene, kanye kwabantu ezahlukene nezakhi ezimahhadlahhadla kanti okusezingeni eliphezulu dispensability amanzi, futhi kulula nombala futhi stably ziye ezindaweni usimende slurry, futhi yakha ibhuloho isakhiwo ukuvuza ukuvimbela ngempumelelo okuvela ukuvuza komhlaba . Lapho umthamo kuyinto 3.0kg / m 3, kungaba ngcono amandla compressive kuze 5 MPA ngaphansi isimo 0.5mm ufa in slurry. It has umthamo kancane, futhi ingasebenza ngcono ukuvumelana slurry, futhi ayinaso nethonya elibi nezinye izakhiwo, futhi kufanelekile zonke izinhlobo ekuqiniseni operation ngezansi 150 ℃.
Nge okusezingeni eliphezulu dispensability amanzi, futhi kulula ukungeza futhi ziye ezindaweni slurry.
Ongafinyelela kangcono ukubekwa uphawu umphumela ku Isikali ongaphakeme.
Ayikho inguquko enkulu kwa-ukusebenza slurry.
Kusebenza ngetinhlobo letibanti letehlukene, singasebenza izinhlobo ezahlukene ekuqiniseni imisebenzi ngezansi 150 ℃.
lisetshenziswe preflush futhi ukuxuba usimende slurry: Ngokuqhubekayo ungeze lokhu umkhiqizo kusukela hopper bondliwe futhi uhlanganise ngokugcwele ke ngemva kokulungisa preflush noma ukuxuba usimende slurry.
Asetshenziswa inqubo ekuqiniseni: ufafaze ku usimende slurry kuhlangana ithangi ngokuqhubekayo futhi ngokulinganayo futhi uzotshala ngenkathi ukuxuba.
Isikali ezinconyiwe: ukwengeza umkhiqizo 3.0 ~ 4.0 kg per imitha cubic kasimende slurry noma preflush.
Esobala noma elimhlophe cluster Imicu yotshani
Ubuningi Bulk, g / cm 3
Ubuningi Ingabe Ohulumeni Banalo Lonke, g / cm 3
pH (2% isixazululo aqueous)
Fibre Ubude, mm
Previous: Agents-OBC-P62S Esilula
Anti Sloughing Futhi Ukuvimba wokufaka Agent
ekuqiniseni Agent Super Sodium Humate Powder
ekuqiniseni Early Amandla Agent
elapha Futhi ekuqiniseni Agent
Emulsifiers ogelezayo nokumanzisa Agents
Ground Marble ekuvaleni Agent
Microsphere elingenalutho ekuqiniseni Agent